मोरंग केराबारीमा कोरोनाबाट ९ जनाको मृत्यु,संक्रमितको संख्या ५सय नाध्यो,
केराबारी । मोरंगको केराबारी गाउँपालिकामा कोभिड १९ को दोश्रो भेरियन्सबाट विहिबार सम्म ९ जनाको मृत्यु भएको छ भने कोरोना संक्रमितको संख्या ५सय बढी पुगेको छ ।
कोरोेना संक्रमणको दोश्रो चरण सुरु भएयता केराबारी गाउँपालिकाबाट ९ जनाको ज्यान गएको छ । जसमा ४ महिला र ५ पुरुष रहेका छन् । यस वोहक ३ जनाको कोरोनाको लक्षण जस्तै देखिने रोगबाट मृत्यु भएको छ । कोभिड १९ को पहिलो चरणमा केराबारीमा २ जनाको मृत्यु भएको थियो संक्रमितको संख्या पनि निकै कम रहेको थियो ।
यता गाउँपालिकामा संक्रमितको संख्या पनि गत वर्ष भन्दा निकै वढेको छ । असार २४ गते सम्मको डाटा अनुसार ५सय १० जनालाई कोरोना संक्रमण भएको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ ।
पालिकाको स्वास्थ्य शाखाले हाल सम्म ५५१ जनामा पिसिआर टेष्ट र ७४५ जनालाई एन्टिजेन्ट टेष्ट गर्दा सो संख्यामा संक्रमित रहेको हो । संक्रमित मध्ये ३१९ जना होम आइस्योलेट भई संक्रमण मुक्त बनेका र १४० जना आ आफनो घरमा आइस्योलेसनमा रहेको पनि पालिकाले सार्वजनिक गरेको डाटामा उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोना संक्रमण तथा रोकथामका लागि हाल पालिकाबाट हाटबजार शैलुन,व्युटिपार्लर जिमखाना संञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएपनि अन्य सवै क्षेत्र खुलेका छन् । ।संक्रमित एरिया तथा प्रभावित क्षेत्रमा पनि संक्रमण दर बढिरहेको छ । संक्रमित व्यक्तिहरुको लार्पावाही र संक्रमणको बेला होमआइस्योलेसनमा बस्न नचाहदा केराबारीमा कोरोना दिनप्रतिदिन बढिरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
कुन वार्डमा कति संक्रमित ?
पालिकामा हाल सम्म सवैभन्दा बढि वडा नं.७ मा संक्रमितहर रहेको पाइएको छ । सुरु देखि नै वडा नं.७ मा संक्रमितहरु बढेपनि सुरक्षा सावधानी नअपनाउने संक्रमितहरु खुलेआम घरबाहिर हिड्ने गर्दा हाल सम्म १ सय १० जनामा संक्रमण भएको स्वास्थ्य संस्थाले जनाएको छ । यता केराबारी ९ मा पनि सोही संख्यामा संक्रमितहरु रहेको पाइएको छ ।
वडा नं. ९ केराबारीको सवैभन्दा ठूलो वडा रहेको र वडा नं.९ को सीमाक्षेत्र खुला र बेलबारी लेटांगसंगको सिमाना खुला रहेको र आउजाउ गर्ने मानिसहरुको चहलपहल पनि त्यति नै धेरै भएकाले संक्रमीत बढेको हो ।
संक्रमितहरु बढी रहेको वडामध्ये वडा नं.१० दोश्रोमा रहेको छ । केराबारीको बजारक्षेत्र मानिएको यस वडामा मानिसहरुको चहल पहल बढी हुने र विभिन्न ठाउबाट आउने मानिसहरुको चापका कारण यस वडामा संक्रमण दर फैलिएको पाइएको छ । वडा नं. १० मा ७९ जना व्यक्ति संक्रमित भएका छन् ।
यसवाहेक बडा नंं ८ मा ७६ जनालाई कोभिढ १९ को दोश्रो भेरियन्सबाट संक्रमित भएका छन् । वजार संगै जोडिएको यस क्षेत्रमा क्रसर उद्योगहरु रहेका कारण विभिन्न गाडी तथा उद्योगमा काम गर्ने मजदुर लगायतको सम्पर्क र स्थानीय मानिसहरुको लार्पावाहीका कारण संक्रमण बढेको पाइएको छ ।
यसवाहेक ६मा ३० जना वडा नं.५ मा ४० जना,वडा नं.३ मा २८, वडा नं. २मा२४ जनामा संक्रमण भएको पाइएको छ । वडा नं. ४ मा ६ र सवैभन्दा कम वडा नं.१ मा ५ जना रहेका छन् ।